Recipe Calendar - Meal Planner Android အတွက်ဒေါင်းလုပ်ပြုလုပ်ပါ
ပင်မစာမျက်နှာ » ဟင်းချက် Apps ကပ » ကြော်ပြက္ခဒိန် - အစားအစာအစီအစဉျ
ကြော်ပြက္ခဒိန် - အစားအစာ Planner က APK ကို
ဤသည်မုန့်ညက်စီမံသင်၏အချိန်ချက်ပြုတ်သိမ်းဆည်း! ဒါဟာအသုံးပြုရလွယ်ကူမယ့်: အစာစားအစီအစဉ်ကိုရှေးခယျြတဲ့ကုန်စုံစာရင်းနှင့်အတူစျေးဝယ် သွား. , step-by-ခြေလှမ်းလမ်းညွန်သုံးပြီးသင့်ရဲ့အစားအသောက်ချက်ပြုတ်။ သင်တို့သည်ငါတို့၏အစားအစာများကိုကြိုက်နှစ်သက်မယ်! ညစာအတွက်အထူးတစ်ခုခုလုပ်ချင်ပါသလား ပိုကောင်းတဲ့စာရွက်ရှာပါနှင့်သင့်ဒီနေ့အစားအစာများကို update ။
အကောင်းဆုံးရှုပ်ထွေးခြင်းနှင့်စတိုင်အားဖြင့်သင်တို့ကိုကိုက်ညီသောအပတ်စဉ်အစီအစဉ်ကိုရွေးချယ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကျန်းမာအစားအစာအနိမ့်-carb, သက်သတ်လွတ်, Low-ကယ်လိုရီနှင့်ပင် paleo menus တွေပါဝင်သည်။ ကလူကိုစားလိမ့်မည်သူတို့ပေးသောအစားအစာများရပါလိမ့်မယ်, နှင့်သင့်လျော်သောအဖြစ်သင့်အချိန်ဇယားကို update မည်မျှဆုံးဖြတ်ပါ။ မည်သည့်အစားအသောက်ကန့်သတ်ရှိပါသလား? ကြော်ပြက္ခဒိန်သူတို့ကိုအောက်မေ့ခြင်းနှင့်သင်သာဘေးကင်းလုံခြုံချက်ပြုတ်နည်းများအကြံပြုသည်။
ဘေကွန်, ကြက်သားဟင်းရည်, ဒါမှမဟုတ်ခေါက်ဆွဲနှင့်အတူကြော်ဝက်သားနှင့်အတူခရမ်းချဉ်သီး: သင်တစ်ဦးအစပြုသူထမင်းချက်ဆိုလျှင်လူသိဟင်းလျာများနဲ့ရိုးရှင်းတဲ့ menu ကိုအသုံးပြုပါ။ ပိုပြီးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတစ်ခုခုလုပ်ချင်ပါသလား ရှုပ်ထွေးသောအကြံပြုချက်များကိုသုံးပါနှင့်ကမ္ဘာအတွက်အကောင်းဆုံးတစ်ခါတလေစားဖိုမှူးများကထောက်ပံ့ပေးထူးချွန်ချက်ပြုတ်နည်းများမြည်းစမ်း!
ကျန်းမာရေး, ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဆုံးရှုံးအလေးချိန်ဂရုစိုက်? ကိုယ်အလေးချိန်ဘို့ငါတို့အစားအစာများထဲမှတစ်ခုကိုရွေးချယ်ပါကနောက်ကိုလိုက် - ထိုကြံ့ခိုင်ရေးမုန့်ညက်အစီအစဉ်များကိုတစ်ဦးကယ်လိုရီတန်ပြန် App ကစုဆောင်းအစစ်အမှန်အာဟာရစာရင်းဇယားအပေါ်အခြေခံထားတယ်။ အဆိုပါအလေးချိန်ဆုံးရှုံးမှုစာရင်းဇယားထေူ: ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျန်းမာသောအစားအစာအစီအစဉ်နောက်လိုက်ကျိန်းသေပေါင်ဆုံးရှုံး!
ကြိုတင်သတ်မှတ်ထား menus တွေအကြားဆွဲဆောင်မှုဘာမှကိုမတှေ့နိုငျပါသလော သင်၏အပတ်စဉ်အစားအစာများကိုယ့်ကိုကိုယ်အချိန်စာရင်းဖို့စီမံသုံးပါ။ ရိုးရှင်းသော, အစားအသောက်, သက်သတ်လွတ်, Low-ကယ်လိုရီ, ကလေးငယ်များနှင့်ပိုပြီး: ကြော်ပြက္ခဒိန် 5000 ချက်ပြုတ်နည်းများထက်ပိုမိုပါဝင်သည်! သင်ပင်, သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်စာရွက်ဖန်တီးသင့်ရဲ့အနာဂတ် menus တွေအတွက်အသုံးပြုရန်နှင့်အခြားအသုံးပြုသူများထောင်ပေါင်းများစွာ၏အတူကမျှဝေနိုင်ပါသည်။
ဤတွင်ကြော်ပြက္ခဒိန်ပိုမိုကြီးမြတ် features တွေနေသောခေါင်းစဉ်:
အစားအသောက် $2သို့မဟုတ် 20 မိနစ်အမှုဆောင်များနှင့်အဆင်သင့်နှုန်းလျော့နည်းရွေးချ။ ကြောင်းအစဉ်အဆက်ဖြစ်နိုင်ပါသလော ကြော်ပြက္ခဒိန်စာရွက်စျေးနှုန်းခန့်မှန်းခြင်းနှင့်ချွေတာချက်ပြုတ်နည်းများအားဖြင့်သင်တို့ကိုထောက်ပံ့ပေးသောတစ်ခုတည်းသော App ဖြစ်ပါတယ်။ အခြားဖြစ်နိုင်ခြေရွေးချယ်ရေးရွေးချယ်စရာချက်ပြုတ်အချိန်, အစားအသောက်များတွင်ဦးစားပေး, နှင့်ဘောဇဉ်အမျိုးအစားဖြစ်ပါသည်။
သင့်ရဲ့မုန့်ညက်အစီအစဉ်များနှင့်အကြိုက်ဆုံးများသင်၏ကိရိယာများအားလုံးဖြတ်ပြီးညှိနေကြသည်။ မုန့်ညက် prep အဘို့အစျေးဝယ်နှင့်တက်ဘလက်သွားကြဖို့ဖုန်းကိုသုံးပါ။ သင့်ရဲ့ဒေတာကိုဆာဗာပေါ်မှာသိမ်းထားခြင်းနှင့်ရှုံးနိမ့်ခြင်းကိုဘယ်တော့မှလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
မုန့်ညက်စီစဉ်၏ 200K အသိုင်းအဝိုင်း။ ကြော်ပြက္ခဒိန်လူမှုရေးနှင့်ရပ်ရွာ-မောင်းနှင် App ဖြစ်ပါတယ်။ မိတ်ဆွေများကိုရှာပါသူတို့နှင့်အတူချက်ပြုတ်နည်းများနှင့်ဘောဇဉ်အစီအစဉ်များကို share, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦးပံ့ပိုးဖြစ်လာနှင့်စီမံကိန်းဒေတာဘေ့စဖို့သင့်ကိုယ်ပိုင်ချက်ပြုတ်နည်းများသို့မဟုတ်အစီအစဉ်များကိုထည့်ပါ။
ယခုကြော်ပြက္ခဒိန် Install ဟင်းလျာများ၏ရှေးခယျြမှုအဘို့သင့်အဖိုးတန်အချိန်ကုန်သက်သာခြင်း, ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူသင့်ရဲ့အစားအသောက်စီစဉ်!
အဆိုပါ Pro ကို-ဗားရှင်းများအတွက်စျေးနှုန်းများယခုသင်အသင့်တော်ဆုံးအကောက်အခွန်ရွေးချယ် 75% အထိကယ်တင်နိုင်, လျှော့ချနေကြသည်။
ကြော်ပြက္ခဒိန် - အစားအစာအစီအစဉျ
19.81 ကို MB
ChefTap: ကြော် ...